खेलकुदका लागि वर्ष २०७४ः क्रिकेटमा ऐतिहासिक सफलता, अन्यमा मिश्रित नतिजा | गृहपृष्ठ
Home खेलकुद राष्ट्रिय खेल समाचार खेल विविध खेलकुदका लागि वर्ष २०७४ः क्रिकेटमा ऐतिहासिक सफलता, अन्यमा मिश्रित नतिजा
खेल विविध 29 views
चैत ३०, काठमाडौं । नेपाली खेलकुद क्षेत्रका लागि २०७४ साल मिश्रित रह्यो । वर्ष २०७४ मा नेपाली खेलकुदले क्रिकेटमा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्‍यो भने अन्यमा मिश्रित नतिजा निकाल्यो ।
क्रिकेटमा नेपालले एक दिवसीय मान्यता पाउनु नेपाली खेल इतिहासकै मुख्य उपलब्धि रह्यो भने नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)को विवाद भने कायमै रह्यो । आइसिसीबाट क्यान हालसम्म प्रतिबन्धित छ । यद्यपि समस्या समाधानको प्रयास भने जारी रहेको निलम्वित क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द बताउँछन् । ‘चाँडै नेपाली क्रिकेटको समस्या समाधान हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
क्यान विवादबीच नेपालले क्रिकेटमा एक दिवसीय अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पाएको छ । नेपालले आगामी चार वर्षसम्म थुप्रै अवसर पाउनेछ । यसै वर्ष नेपाल आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन दुईको विजेतासमेत बन्यो । युवा क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेले इन्डियन प्रिमियर लिग(आइपिएल)मा आबद्ध हुने मौका पाए । उनी डिल्ली डेयरडेभिल्ससँग रू. ३२ लाखमा आबद्ध भए । अहिले उक्त प्रतियोगिता भारतमा जारी छ ।
यस वर्ष नेपाली फूटबलमा धेरै विवाद र कमैमात्र प्रतियोगिता भए । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)को निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन सकेन । यही चैत १४ गतेलाई तोकिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन स्थगित भएको छ ।
‘कार्यसमितिको निर्वाचन रोकी पाऊँ’ भनी भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला फुटबल सङ्घले एन्फालाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निषेधाज्ञा मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यसमितिको निर्वाचन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएकाले निर्वाचन अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । एन्फा कार्यसमिति सदस्य रमेशराज रायमाझी निर्वाचन अन्योलमा रहेको बताउँछन् ।
वि.सं. २०७४ जेठ ११ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भलिबल खेललाई नेपालको राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिने निर्णय ग¥यो । राष्ट्रिय खेल घोषणापछि अहिले सर्वत्र भलिबलको चर्चा छ । भलिबलमा पछिल्ला वर्षमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गर्दैआएको छ ।
राष्ट्रिय खेल घोषणापछि यसै वर्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरसम्मको प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न रू. एक करोड २० लाखको सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार एफएनसिसिआई कप राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता तीन चरणमा आयोजना गरिने नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जनरमण शर्मा बताउँछन् ।
यसै वर्ष भलिबलको विकास र विस्तारका लागि नेदरल्यान्ड भलिबल सङ्घले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै विभिन्न अन्तरराष्ट्रियस्तरका मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता समेत नेपालले खेल्न पाएको भलिबलका राष्ट्रिय प्रशिक्षक जगदीशप्रसाद भट्टले बताए ।
वर्ष २०७४ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले १९ खेल सहभागी गराएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् च्याम्पियनसीप आयोजना गर्‍यो । देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित उक्त प्रतियोगिता नेपाली खेलकुदमा नयाँ प्रयोग हो । यसअघि यस्ता प्रतियोगिता राखेपले गरेको थिएन ।
‘खेलाडी जब खेल क्षेत्रमा लाग्छ, त्यसबेला उसले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित पार्ने सपना पनि देख्छ । त्यसै सपनाका साथ खेलाडीले वर्षौंसम्म दिनरात नभनी पसिना बगाउँछन् । जब उनीहरूले आफ्नो मेहनतको फल प्राप्त नभएको र राज्यले पनि केही नगरेको अनुभूति गर्छन्, त्यसबेला उनीहरू विकल्पको खोजीमा लाग्छन्,’ उनले भनिन् ।
एक दशकसम्म एथ्लेटिक्समा सक्रिय केशरी चौधरी भविष्य नदेखेपछि दुबईतर्फ लागेकी छिन् । चौधरीजस्तो प्रतिभाशाली खेलाडी बाहिरिनु नेपालकै लागि दुर्भाग्य भएको एथ्लेटिक्स प्रशिक्षक चन्द्र गुरुङ बताउँछन् । ‘केशरीजस्तो खेलाडी विदेश जानु भनेको नेपालको खेलकुदलाई घाटा हो,’ उनले भने ।
‘खेलाडी पलायन हुनुको मुख्य कारण नियमित रूपमा प्रतियोगिता नहुनु हो । फुटबलको कुरा गर्दा वर्षौंदेखि प्रतियोगिता नहुँदा पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ । पहिलाका खेलाडी देश सम्झेर जीवन बिताउँथे, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन,’ राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वकप्तान हरि खड्काले भने । रासस
३० चैत्र २०७४, शुक्रबार १६:१८